Maxaa laga bartay barbarihii kooxaha Liverpool iyo Tottenham… (Kane iyo Coutinho oo isku jawaabay) – Gool FM
Maxaa laga bartay barbarihii kooxaha Liverpool iyo Tottenham… (Kane iyo Coutinho oo isku jawaabay)
Haaruun April 3, 2016
(Liverpool) 03 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxa ay barbaro 1-1 kala kulantay Tottenham Hotspur oo ay ku soo dhaweysay garoonkeeda.
Kulankii ka dhacay Anfield ayaa waxaa goolka la horreeyey wiilasha macallin Klopp, waxaana u dhaliyey xiddiga reer Brazil ee Coutinho 51’daqiiqo, inkastoo Spurs goolka barbaraha ay la yimaadeen 63’daqiiqo waxaana u dhaliyey Harry Kane.
>- Harry Kane oo heer ciyaareed shaqsiyadeed oo wanaagsan ku jira ayaa dhaliyey xilli ciyaareedkan 22 gool, waxaana uu garaacay isku dar goolashii uu dhaliyey xilli ciyaareedkii hore oo ahaa 21 gool.
>- Harry Kane hadda waxa uu dhaliyey 22 gool oo horyaalka ah waana ciyaaryahanka ugu badan ee goolashaas u dhaliya Spurs tan iyo Gary Lineker oo 28 gool u dhaliyey Tottenham xilli ciyaareedkii 1991/92-kii.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Tottenham, iyagoo shan ka mid ah kulamadaas guul gaaray.
>- Reds haatan waxa ay kaliya khasaartay hal kulan 22-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Spurs, 14 kulan guul ayey gaartay, halka 7 kulan ay barbaro ku gashay garoonkeeda Anfield.
>- Philippe Coutinho ayaa hadda dhaliyey 10 gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waana markii ugu horreysay oo uu tirooyinkan gaaro labo xilli ciyaareed.
>- Spurs ayaa hal kulan laga adkaaday 15-kii kulan ee ay ku soo ciyaartay horyaalka meel ka baxsan garoonkeeda, kulamadaas 8 waa ay badisay, halka 7 kale ay barbaro gashay.
> – Kooxda Reds waxay lumiyeen 17-dhibcood oo ay ahayd inay guuleystaan, taasoo ahayd tiradii ugu badnayn dhibco la lumiyo Premier League, 13-ka mid ah waxay yimaadeen Jurgen Klopp.
>- Spurs ayaa ka badbaaday inay lumiso 20-dhibcood, taasoo noqoneysa kooxda ugu fiican xilli ciyaareedkan Premier League.
''Waan ku kobeyn doonaa Messi!!!'' - Masar oo Messi ku kacsan! (Maxaa dhacay?)
Sagaal waxyaabood oo laga bartay guushii ay kooxda Real Madrid ka gaartay Barcelona kulankii El Clasico